🥇 Ukuhlela kokukhiqiza
Isilinganiso: 4.9. Inani lezinhlangano: 717
Ividiyo yokuhlela kokukhiqiza
Oda ukuhlela kokukhiqiza
Izimboni zokukhiqiza zazi kahle ukuthambekela okuzenzakalelayo, lapho ukuhlalisana, ukuhlinzekwa ngezinto ezibonakalayo, ukusatshalaliswa kwemibhalo, umsebenzi wabasebenzi, ukuphathwa kwempahla kanye namanye amazinga womsebenzi wezomnotho kungaphansi kwesisombululo sedijithali. Ukuhlela kokukhiqiza nakho kungaphakathi kwekhono lohlelo, oluzokwazi ukuletha izinto ezithile zenhlangano ephumelelayo ekuphathweni kwebhizinisi, ukwenza lula ukugcinwa kokusekelwa kokulawulwa kanye nezethenjwa nokulungiswa kwemibiko ngenqubo ngayinye yokukhiqiza.
Ukutadisha okuningiliziwe kwendawo yokusebenza kuletha imikhiqizo ye-Universal Accounting System (USU.kz) esigabeni sezixazululo ezihamba phambili ze-IT emakethe yezimboni, lapho inhlangano yokuhlela kokukhiqiza ithatha indawo ekhethekile. Amabhizinisi amaningi athande ukusebenza kohlelo nokusetha amathuluzi ayisisekelo. Akukho lutho oluyinkimbinkimbi ngabo. Izinqubo zokukhiqiza zingalawulwa kude, ngenkathi ukufinyelela kulwazi kulawulwa inketho yokuphatha. Ukuhlela kungenziwa kalula ngumsebenzisi we-novice oqale abhekane nohlelo lokuzenzekelayo.
Ukuhlelwa kokukhiqizwa ebhizinisini kufaka phakathi imisebenzi yokubikezela ukuze inhlangano ngesikhathi esibucayi ingashiywa ngaphandle kwenani elidingekayo lezinto zokusetshenziswa nezinto zokwenziwa. Ukuthenga kuyazenzakalela. Ukuhlakanipha kwedijithali kuhlelwe ngokuphelele esikhaleni sokugcina impahla. Ukucushwa kuzokwazi ukubhalisa ukwamukelwa kwemikhiqizo, ukusebenzisa amadivayisi we-metering akhethekile, ukulandelela ukuhamba kwempahla, ukulungiselela imibiko yesigaba esithile sokukhiqiza, ukuhlela ukuthunyelwa kwezinto zezimpahla, ukwamukela izinkokhelo, njll.
Ungakhohlwa ukuthi impumelelo yezinqubo zokukhiqiza incike kakhulu kwikhwalithi yokuhlela, lapho yonke into encane ingaba yinto ebaluleke kakhulu. Uma ibhizinisi lingakwazi ukuvala izikhundla zokuhlinzeka ngesikhathi, lokhu kugcwele ukwehluleka komkhiqizo, ukwephula uhlelo. Futhi, inhlangano ingabeka kalula imisebenzi yokuhleleka, ibalwe ngokuningiliziwe izindiza nezindleko zikaphethiloli, igcine umkhombandlela wemikhumbi yezokuthutha, ilawule ukuqashwa kwabathwali, ilungiselele imibhalo ehambisana nayo, ilandelele ukuba semthethweni kwezimvume nezinkontileka zamanje.
Isikhungo ngasinye sokukhiqiza sifuna ukwenza ngcono ukusebenza kahle futhi sinciphise izindleko, ezisizakala ngezinhlobonhlobo zezinketho nezinhlelo ezisezingeni zokusekela isoftware. Lokhu akubandakanyi ukuhlela kuphela, kepha futhi ukubalwa kwezindleko zokukhiqiza, ukuhlaziywa kwezimakethe, ukubiza, njll. Inhlangano yabaphathi izotholakala kalula futhi iqondakale lapho ithonya lesici somuntu lincishisiwe futhi ibhizinisi lingafaki amathuba okwenza amaphutha. Ngasikhathi sinye, ubuhlakani bedijithali abuchithi isikhathi esiningi emisebenzini enzima kakhulu.
Akunasizathu esizwakalayo sokugcizelela ezindleleni eziphelelwe yisikhathi zokulawulwa kwezinqubo zokukhiqiza, lapho ukuhlela kuhlobene eduze namaphepha, ukwabiwa kwezinsizakusebenza okungafanelekile, ukuhleleka okubuthakathaka kanye nokwehluleka ukwenza ukulungiswa nokwengezwa ezinhlelweni ngesikhathi. Lapho uhlomisa uku-oda, ungathola amathuba abanzi azothinta ukusebenza kwesikhungo, usize ukuthola imininingwane evela kusayithi, usebenze ngamadivayisi avela eceleni / ochwepheshe, ugcwalise amadokhumenti ngemodi ezenzakalelayo, njll.